WAR DEG DEG AH: Masuul caan ah oo caawa lagu dilay Laascaanood – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
June 20, 2022 Xuseen 16
Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobalka Sool ayaa sheegay in caawa magaaladaas lagu dilay Guddoomiyihii xisbiga UCID ee Somaliland Maxamed Aflahaar.
Dilka marxuum Aflahaar ayaa la sheegay inay geysteen koox hubeysan, kuwaas oo dilka kaddib ka baxsaday goobta.
Magaalada Laascaanood ayaa sannadihii u dambeeyay waxaa ka dhacayay dilal ay geystaan kooxo hubeysan, kuwaas oo lagu beegsanayo dadka haldoorka ah ee magaalada iyo masuuliyiinta deegaanka ee Somaliland.
I heard Lasanod is a small village, how can then someone kill and disappear if the administration does not know about it?!
Maandeeq Ali says:
Ask Your mom how the killers are scaped and why the authorities are not captured the killers.
War dhulbahantoow isdaaya Oo hal doorkiina ha dhamaynina’ wayga talo
Allah haw naxariisto Marxuumka.
Waxaa diley oo baydhabo Ka soo toogtey dadkii magaalada laga masaafuriyey kkkkkkkkkkkkk
Kumanaanka reer Cali Geri ee know iskaga siiyey Kasi waaye wuxu qaal , caqli xumo dhuloos IGA dheh
Bishii Oktoobar biliwgeedi ,waa tii dad Soomaaliyeed oo 2000 oo qof ku dhawaad,si biniaadamnimada ka baxsan loo barakiciyey magaalada Laas Caanood.
Madaxda maamulka la baxay Somaliland ee oo uu xitaa ka midyahay,Kornayl Muuse Biixi madaxwaynaha maamulkaasi,waxa kaloo arintaasi,barkicinta dadjaasi Soomaaliyeed ka mas’uul ahaa,kornayl Ina Kaahin,madaxda Ciidanka Booliska ee maamulka ka baxay Somaliland.
Waxaa jaloo wax lago,xumaado ahaa,inta badan dadja maamulkaasi ay taageereen ama ka aamuseen.
Tan ugo daran waxay ahayd in kuwo calooshood u shaqaystayaal ah oo reer Laas Caano ah ay arintaasi wax ka fuliyeen.
Haddii dadkii ka barakiciyey ay Amin darada ja mas’uul ahaayeen,waataa weli socota.
War ka ilbaxa,sida aad u dhaqan taan.
oktoobar /3/2021 waa maalin madow,oo dad Soomaaliyeed lafa barakiciyey si qasab ah,dalkooda sabab guracan oo ku dhisan qabyaalad.
Puntland ha illaawin markaad rabto inaad ka hadash tacadiga dadka soomaali koonfurka ah,cadaaladana u dhawow.
Anagu dalkooda ayaan u dirnay bes,gaadiid iyo cuntona waa siinay.
Orod tag Kenya dhulka somaalidu ka degto oo dheh soomaali baan ahay walaalkiin ah in ay kaa socoto kibaandhe la’aan.
Macnaha Somali Kenyaan ma tihid
DDS lamid mustabaqe xabashi
Anagaa waxaas xeerina weli hadii la kala gar qaadanayo.
Soomaali iyadaa isu muuqata,oo is ficlaya,lkn markay dhulkooda ka baxqan waa masaakiin dullaysan.
Dhulbahantaha waa ogyihiin waxa uu salka Ku hayo dilalkaasi.
AANO & AARSI…
Magaalo qarsanaysa dambiileheeda,hadii la ogyahay,la arkayay aan sheegayn xal kale ma leh oo aan ahayn
IIDNKAAIS DILAYEE IS DAAYA.
Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yusuf Cal Koore ayaa wacad kumaray in Ugaaryahan marnaba marti uga noqon Jaamac Siyaad Somaliland.
Waxaa boqolkiiba sagaashan loo badinayaa in dilka Maxamed Aflahaar oo Jaamac Siyaad ah uu Ka dambeeyey Saleebaan Koore
Wuxuu si cad u sheegey in Ugaaryahan oo ah reerka ugu badan Dhulbahante iska leexinayaan kuwa isu heesta in ay Somaliland uga dhowyihiin gaarka ahaan reerka Jaamac Siyaad.
Hii Walaal says:
Kan sarow dadku way ku fahmayaan inaad dadkaas walaalaha ah ka dhex kalluumaysanaysid ninkan iyo dadkii horeba idinkoo snm ah baa laayey markaa adeer annaga waxba indhaha haysugu kaayo qaban reeraha ssc na waxaanu leenahay u midooba dalkiina sidii aad aayahiina uga wada tashan lahaydeen eebbena haydinku garab galo.
Hiil Walaal says:
Hussein mohammed Abdi says:
Any less dhulbanta be united and be honest and sincerely to themselves they will the worst tribes who have no brilliant leader nor no ideology and agenda just working for money and been using at any circumstances I feel sorry for dhulbanta tribes in mess and using to heroes in Somalia 🇸🇴 history but be come the worst tribes lake of unite and lake of leadership
Garyaqaanka Guud says:
@Hussein mohammed Abdi
Waryaa aflagaadada jooji dilalku sow meel kasta dilal kama dhacaan.. haday jiri lahayd qabiil soomaaliyeed oo hogaamin la xusi kara haysta dalkuba sidan ma ahaadeen…
Isaaq, dabayaac looma baahna, Dhulka waa inuu ahaada dhulkii Darwiishta, ee Darood
SNM Mujaahid says:
Laascaanood waa magaalo SNM SOMALILAND ooya ama habaartama we know how to deal with faqash . Haddaad faqash oo dhan isu imaataan from garowe bosaso galkagacayo Caabudwaaq galdogob Jigjiga gaarisa iyo kismaayo wallaahi beydaan waxba naga qaadikarin ..Ilaah waa nabaray sidaan waddo u qaadsiino faqash .
Waar ina dilayaa waa Iidoor oo raba inay haldoorka inaga laayaan si loo waayo qof wax garanaya ama fahmaya waxa iidoor naga damacsan yahay. Dhowr mar oo hore waad maqasheen iidoor oo leh dhul ma guuree dadka guura, dee waa muuqataa in dadkii laga tirtirayo dhulka waana caddahay cidda dilka hal doorka ka dambaysa.